I-ecoescape: i-ecoescape: ikhaya elincinci elizimeleyo - I-Airbnb
I-ecoescape: i-ecoescape: ikhaya elincinci elizimeleyo
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguEdward
Molo, ndinguEdward! jonga insta yethu @ecoescape ukuze ufumane ezinye iifoto + ulwazi! Oku kuphuncuka kuyinxalenye yekhaya eli-2 elincinci elibekwe kumazantsi eTaranaki kunye nemibono yentaba engalinganiyo. Imizuzu eyi-15 ukusuka edolophini naselunxwemeni, ilitye lokuphosa intaba kunye neetrakhi zebhayisekile eli khaya lincinci lizimele liyindawo efanelekileyo kwabo banqwenela ukutyelela iTaranaki kwi-adventure okanye ukuphumla. Inikwe amandla ukusuka kuzo zombini iiphaneli zelanga kunye nee hydro turbines, le ndawo inje "ngaphandle kwegrid" njengoko ifumana.
Sijonge phambili ekubeni uhlale!
Kwipropathi ebanzi (ikhaya labazali bam kunye neshishini) kukho ichibi elinama-kayak, izilwanyana zasefama, isikhephe esiqengqelekayo, iintshulube ezikhanyayo, iigadi, iindlela zokuhamba zonke ezifumanekayo ukuba uzihlole kwaye uzisebenzise.
Senza konke okusemandleni ethu ukuze sikwazi ukuzimela kwaye sizinze kwaye kungoko sinezitiya zokuvelisa ukutya kwethu. Ngexesha lezinto ezininzi iindwendwe zikhululekile ukuba zithathe iigadi - cela uLinda kuqala. Sizama konke okusemandleni ethu ukurisayikilisha kangangoko sinako, ngoko ke nceda usincede ekwenzeni oko.
Ngolwazi oluthe vetshe nceda ujonge i-Instagram page: @ecoescape
Enye yeebhedi iphezulu kwileli ethe nkqo kwindawo ephezulu, le bhedi ilungele kuphela abo bafanelekileyo nabakwaziyo ukunyuka nokuhla.
Zonke iindawo ezingaphandle zivulekele iindwendwe.
Abantwana abancinci kufuneka babekwe esweni ngalo lonke ixesha njengoko izilwanyana zechibi, imijelo kunye neefama ziyingozi yokhuseleko.
Iindledlana zokuhamba ematyholweni zinokutyibilika kakhulu xa zimanzi, ngoko ke nceda uhambe ngononophelo kwaye ungabaleki.
4.96 · Izimvo eziyi-355
Ubumelwane busemaphandleni, kufuneka ujonge ukubona ezinye iipropathi.
Ukuba ufuna uncedo, musa ukuba neentloni - cela nje. UMichael (utata wam) uhlala esekhaya (kwii-200m kude) kwaye uqhele ukuzifihla kwiofisi yakhe esayinwe ngokucacileyo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Korito